LUYINI UCWANINGO LWE-AMP?
U-AMP umelela ukuthi Antibody Mediated Prevention (Ukunqanda Isifo Nge-antibody). Lona umqondo wokunika abantu ama-antibody ukuze kubonakale ukuthi azobavikela yini abantu ekungenweni yi-HIV.
Ucwaningo lwe-AMP luwumqondo omusha wokuvimbela i-HIV ohlobene nalokho okwenziwe ocwaningweni lokugomela i-HIV. Ocwaningweni oluvamile lokugomela i-HIV, abantu bathole umuthi wokugoma bese abacwaningi belinda ukuze babone ukuthi imizimba yabo iyawenza yini ama-antibody okulwa ne-HIV. Kulolu cwaningo, sizoseqa leso sinyathelo, sinikeze abantu ama-antibody bukhoma/ngqo. Lokhu sizokwenza ngokufaka umjovo emthanjeni, ngokujwayelekile okwaziwa ngokuthi i-“IV” noma “ukuthola idriphu”. Lolu ucwaningo lokuqala oluhlola ukuthi ingabe ama-antibody angakunqanda yini ukungenwa yi-HIV kubantu.
IYINI LE ANTIBODY?
Ama-antibody angamaphrotheni emvelo alwa nezifo emzimbeni. Ayakwazi ukunamathela ngaphandle kwamabhaktheriya nakumagciwane ukuze awanqande angadali izifo. Lokhu kuthiwa “ukuthena amandla.” Ungacabanga ngama-antibody njengamasosha omzimba, asebenza ukuvikela abantu bangangenwa yizifo. Le antibody, okuthiwa i-VRC01, iyi-antibody enqanda amandla e-HIV. Ukuhlola kwaselabhorathri kubonise ukuthi ama-antibody anqanda isifo njenge-VRC01 angavimbela ukungenwa yizinhlobo eziningi ezihlukene ze-HIV ezivela emhlabeni wonke. Lokhu ikwenza ngokunamathela ezindaweni zegciwane elizisebenzisela ukunamathela kumaseli anempilo, inqande igciwane. Ucwaningo lwe-AMP luzosisiza sithole ukuthi ingabe i-antibody ye-VRC01 izoyivimbela yini i-HIV kubantu.
NGITSHELENI KABANZI NGE-IV NOMA IDRIPHU.
I-IV noma idriphu iqala ngesikhwama sengxube kasawoti evamile, inhlobo efanayo yamanzi anosawoti anganikezwa abantu abaphelelwe amanzi emzimbeni. Usokhemisi ufaka i-antibody ye-VRC01 engxubeni kasawoti. Umthamo we-antibody ofakwayo uncike esisindweni sombambiqhaza wocwaningo, ngakho abantu abanesisindo esiphakeme bazothola i-antibody ethe xaxa. Kuzohlolwa amadosi amabili e-antibody ukubona ukuthi angasebenza yini ekuvimbeleni ukungenwa yi-HIV: idosi engu-10 mg/kg, kanye nedosi engu-30 mg/kg. Abanye abantu bazothola i-placebo, okuyingxube evamile nje yamanzi anosawoti angenayo i-antibody. I-IV noma idriphu inikezwa umbambiqhaza wocwaningo imizuzu engu-30-60. Ukuze unikwe i-IV, kusetshenziswa inaliti engenagciwane ukufaka ishubhu elincane lepulasitiki emthanjeni engalweni yombambiqhaza. Kulengiswa isikhwama esinoketshezi esigxotsheni bese sixhunywa kuphampu, elawula ukuthi okungaphakathi kwesikhwama kungena ngokushesha okungakanani ngeshubhu elisengalweni yombambiqhaza.
Ucwaningo lwenziwa yizinhlangano ezimbili, i-HIV Vaccine Trials Network ne-HIV Prevention Trials Network. Zombili lezi zinhlangano kanye nayo yonke imitholampilo yocwaningo eneqhaza zisebenza ngokubambisana nomphakathi ukuze kuqinisekwe ukuthi lolu cwaningo luyamukeleka emphakathini wendawo futhi luhlonipha amasiko endawo.
Umbambiqhaza uthola idriphu emthanjeni (i-IV) .
AMP Animation #1 - Zulu
AMP Animation #2 - Zulu
AMP Animation #3 - Zulu
AMP Animation #4 - Zulu